Ururka Hormarinta Gobalka Karkaar oo Ka Hadlay Hormarka Maagaaladda Qardho (dhegayso) – Radio Daljir
Ururka Hormarinta Gobalka Karkaar oo Ka Hadlay Hormarka Maagaaladda Qardho (dhegayso)
Siteenbar 18, 2017 4:39 g 0
Magaalada Qardho xarunta gobolka karkaar waxaa ka jira ururka horumarinta degmada Qardho oo ka shaqeeya arrimaha bulashada ,waxaana uu gacan ka gaystaan caawinta dadka saboolka ah isagoona door muuqda ku leh horrumarinta degmad qardho dhinac kasta ha noqotee .
Xubnaha ururka ayaa isugu jira Daljoog iyo dibad joog waxaana sidoo kale ku jira xubno dawladda ka tirsan iyo Ganacsato.
Ururkaan oo la aas aasay muddo 5 billood ka hor ah ayaa illaa hadda ku guulaysatay caawinta dad badan oo baahan iyo dhisamaha waddooyin iyo Aargooyin casri ah .
Ujeedka uruka loo aasa aasay dhaq dhaqaaqa waxqabadka Agoomaha iyo horrumarinta degmada Qardho.
Haddaba Astur Jawaase Cabdi oo ah Xildhibaanad ka tirsan gollaha deegaanka degmada Qardho iyo Guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ururka horumarinta degmada Qardho ayaa Khadka telefoonka waxaa ku warraystay wariye Axmed Sheekeeye oo ugu horrayn weydiiyay bal inay faah faahin ka bixiso waxqabadkooda mudada ay jireen.